Khumbula ukuthi shining ukumamatheka ezimhlophe owawunalo njengoba ingane. Manje owabeke uphawu ngezihluthu ngezinyo, futhi bayesaba ukuthi umuntu ubona? Kulesi sihloko sizokubonisa indlela yokuxazulula le nkinga.
Ngokuvamile kaningi ibekwe photopolymer seal ngemuva - oluyinhlanganisela. Material ayizwayo ngalo ingaphakathi we ngezinyo, uhlukaniswe ngamaqembu amathathu. Amandla ayo ezinkulu kukhona nokwethenjelwa ukubukeka yobuhle.
Yini okufanele seal ngezihluthu amazinyo? Usimende libhekisela isizukulwane endala ngezinto, zisasetshenziswa by odokotela bamazinyo. Ingqikithi isetshenziswa odokotela ikakhulu ezibhedlela zomphakathi. Usimende ofakwe ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi i-zinc-phosphate noma polycarboxylate.
Futhi ake uzame ukuhlola kwabo ngezinga elingelikhulu? Ngaphakathi accordance nga lo uhlelo, banayo ngamandla amaphuzu 2-3. seal okunjalo shwabanisa, ngenxa yalokho kokulahlekelwa ukuma, ekuqaleni kubanika wamazinyo, futhi akazange ame. Ngaphezu kwalokho, ngemva okuzobe kudlalelwa iziguli ayenqatshelwe ukudla amahora 2-3. Uma okuya ngasethunjini, kungaholela ngabodwa, ukuncipha, imidwebo phezu usimende.
seal okunjalo akukwazi ababethi umbala ngezinyo, ngakho abonakala emlonyeni. tebuciko yabo balinganiselwa ku 1-2 amaphuzu. Banezinhliziyo inzuzo esiyingqayizivele - amanani aphansi. Uma ufisa seal ihlala okungenani 5 iminyaka, kudingeka ukhethe impahla ezahlukene.
Uphawu amazinyo angaphambili kufanele zingabonakali. Composite - kusho "inhlanganisela". Lokhu impahla ukugcwaliswa siqukethe izinto eziningana. ukuqina kwalo balinganiselwa ku 4 amaphuzu. Kulo ungakha uphawu sasivumela okuthembekile. Isikhathi sokuphila kwayo luncike ezandleni izingcweti - okuyisilinganiso seminyaka engu 3-5, ngezinye izikhathi isikhathi eside. Ngakho-ke, kulesi simo kubalulekile ukuthola wamazinyo okukhulu.
Kusukela impahla eluhlaza ixubene ngesandla, kubalulekile ukukwenza kahle. Kungenjalo, kungase kuvele porosity kunciphisa amandla kophawu. Ngemva isitatimende wakhe akakwazi ukudla amahora 2-3.
sobuhle bayo esiyinhlanganisela balinganiselwa ku 3-4 amaphuzu. Hue seal eyenziwe le nto, ungakwazi ukuqhubeka, kodwa ngeke nibe ngabaphelele, okungukuthi, kusenzima ubani ubungeke. Composite has kusimo eyodwa ngaphezulu - ke mnyama ngokuhamba kwesikhathi.
Kukhona uphawu ruble 293 enjalo. Lena indlela enhle uma ufuna ukukubhala endaweni ukucasha - ucishe thembeke nangemali ephansi.
Photopolymer ofakwe ku amazinyo angaphambili ongema kusukela eminyakeni 10 noma ngaphezulu. Kuyinto lamadolobha esimanjemanje kakhulu. Izinga amakhadi bamazinyo angathola khona photopolymer lwezimpawu 1, 2 no-3 amazinga obulukhuni. Lokhu kubonisa inani impahla esetshenziswa ukumboza isici ngezinyo, kanye nenani umsebenzi. The ephakeme ezingeni, aba maningi intengo.
Amandla ketshezi kuyinto 5 amaphuzu. Photopolymer - okokusebenza isikhathi eside kunazo zonke kusukela lapho uphawu senziwa. Ziyakwazi nqabela ngokukhulu ukushesha kangangokuba nje baphuma ngisehhovisi likadokotela wamazinyo, nawe ungadla.
tebuciko yabo balinganiselwa ku 5 amaphuzu. Photopolymers inganikelwa umbala, kungakuhle kakhulu eduze umbala wemvelo amazinyo akho. Futhi ekhaya ukukhanyisa, futhi ilanga futhi ultraviolet disco ukukhanya uphawu yakho akekho uphawule.
Photopolymer enze yobuhle sokubuyiselwa zamazinyo lapho kubalulekile ukuthi kophawu ezincane zase zihleliwe endaweni encane. izinto Okunye ezimweni ezinjena akunakwenzeka ukulungisa. Kuyaziwa ukuthi kungonakalisa aesthetics pin metal kokuba umbala ethize ezaziwayo. Ungacela ukuthi ufake fiberglass (ngale) pin okungekho muntu ongabona.
By the way, photopolymers hhayi mnyama. Uma ofakwe yakho ku amazinyo angaphambili wenza lezi zincwadi, kuyoba eside futhi bheka aesthetically elimnandi. Namuhla, izindleko salo ruble 732 kuphela. Lena ukhetho best. Yiqiniso, uma uthanda ukulondoloza, ungakhetha oluyinhlanganisela.
ofakwe ofiphele amazinyo angaphambili kumele senziwe wamazinyo nge "izandla segolide." Phela, ukuqina yabo incike ubuchwepheshe ekwakhiweni. Ngokwesibonelo, uma wengeza i-pin (ihange), bona isikhathi eside. Ngakho kudingeka ucele ajwayelekile, lokho ochwepheshe bancamela.
Kuyaziwa ukuthi kophawu kungase kube okwesikhashana ngenxa yezizathu angahambisani namazinyo nobuchwepheshe Uchwepheshe ezaziwayo. Abakwazi ngokushesha ukuwohloka ngenxa yezinkinga ezihlukahlukene zenhliziyo (kuhlanganise yobudala, ezifana isifo sokuqina kwemithambo yegazi), izifo igazi, izimila, nolaka yokwakheka ngamathe, ukuvuvukala izinsini, nokuntuleka kwenhlanzeko. Ngakho-ke, uma uphawu kwadingeka yokuqala, ungalibali Ukuvakashela udokotela wamazinyo.
Uma ufaka uphawu ku amazinyo angaphambili, kufanele uhlole ngokucophelela uhla lwamanani. Uma ulithole khona ingilazi ionomer ofakwe, yazini ukuthi iyona impahla eluhlaza, esetshenziswa njengoba ulwelwesi e izimbotshana ezijulile, ikakhulukazi ezinganeni. Ngalo, izinyo kubuyiselwa ngokushesha ngemva caries.
Uma intengo ukufunda igama elithi "zobumba", kusho into ezisetshenziswa emasimini ukukhiqiza ukudla veneers. Lokhu pads ekhethekile on the amazinyo, ebanikeza akhanye enhle.
Wena uphawu ongabonakali ngezihluthu amazinyo? Ungakwazi isithombe nge amamatheke ngenkulu injabulo. Ukuze uphawu ihlala isikhathi eside, kudingeka ulandele lezi amathiphu.
Ungakhohlwa ukuxubha amazinyo akho ngemva kokudla, ekuseni nakusihlwa.
Daily ukusetshenziswa Floss (Floss). Ngemva ibhulashi ngomuthi wokuxubha akususi zonke izinsalela zokudla, abakwazi zigezwe izikhala interdental. Kodwa uhala - kalula.
professional amazinyo yokuhlanza kwenziwa okungenani kabili ngonyaka. Kungaba kwenziwe nge isihlabathi kanye ultrasound.
isakhi esithile esikhethekile
Ukuze womshini ofakwe ukukhanya bamazinyo ukusebenzisa lamalungelo izinto zakamuva, polymerized ngaphansi kwethonya kwelanga. Kuyinto impahla eluhlaza ukubunjwa yayo iqukethe isakhi esithile esikhethekile, okuyinto uchayeke kakhulu ithonya ukukhanya.
Seals ukukhanyisa babe yenziwe ngohlobo oluhlukile evumela ukuba ukhethe uhlobo wayefisa impahla esimweni ngasinye:
I esakhiwe kusukela ezinhlayiyeni ezinkulu inikeza ukugcwaliswa kakhulu. Lokhu impahla eluhlaza kungcono ukubekezelela friction, kodwa kuyahluka ababuthakathaka ubuhle. Ukuze uthuthukise ukubukeka entsha ubuchwepheshe bamazinyo lwezimpawu uluphi eyodwa bengathola i material ekahle.
Izinzuzo kanye nezici
Seals izibani sinezimfanelo lokhu okuhle okwenzekile:
Kungakuhle ukubuyisela izinyo ukuma, ngisho lapho kubhujiswa umxhwele;
imisebe lukhuni ngaphansi kwethonya izibani UV;
It ivumela uhlelo ibanga elikhulu shades ukukhetha umbala photopolymer koqweqwe lwawo;
namandla kunomFilisti izinto zokusetshenziswa Lokudabuka chemical;
izinto ngokuphelele non-enobuthi;
nge kwenhlanzeko ngokucophelela ingahlala iminyaka engaphezu kwemihlanu;
ephephile ezempilo, ngakho bajwayele zokwelatjhwa kwamazinyo abesifazane abakhulelwe;
plastic ezingaphezu kuka lwezimpawu chemical - bona zingase zimiswe bengabheki solidification okusheshayo komsebenzi.
seal Khanyisa babe nebubi ezifana:
asihambisani ukubuyiselwa ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo;
ezingenanzuzo zabo ukuze uwasebenzise njengasemuva yesikhashana, njengoba ezibizayo.
Uphawu ukukhanya igibele ohlangothini namazinyo phambi. Okokuqala, kwakheka indaba emlonyeni lesiguli ke kwathiwa zishiswe ephethe ilambu UV ngoba solidification. Khona-ke izinyo is phansi wokucwebezelisa, ukugaya nokuhlanganisa ukuvenisha.
Kuyaziwa ukuthi lezi ofakwe lukhuni ngokushesha, ngakho-ke ingaphakathi amazinyo kungase kwandise izingxabano futhi aqhephukile. Yingakho odokotela bamazinyo photopolymer izingqimba isicelo kancane kancane.
izinto Retro-lembhali zivamise zahlanganiswa ngo imijovo alahlwayo noma igobolondo. Lokhu ehilelekile kwenza kube lula ukuba udokotela umsebenzi kusukela ngaphambi kokufaka akudingeki ukulungiselela isixazululo. Ngaphezu kwalokho, luhlanzekile futhi iphephile.
Ngiphakathi wamazinyo ngeke bakutshele kangakanani kumelwe kusebenze njengesibonakaliso yakho ukukhanya uphawu. Lokhu ehilelekile luncike ukudla ukuthi adle, ku ukuhambisana inhlanzeko yomlomo. Ngokokuqala ngqá ngemva welashwe kubaluleke ukulandela izincomo udokotela.
Photopolymer yisilinganiso emi-3 kuya 5, kodwa uma fuza hle cophelela of him, le nkathi kungase kukhule izikhathi 2.
Abantu abaningi banesithakazelo umbuzo kanjani mhlophe uphawu ngezihluthu izinyo. Kungenteka yini? Odokotela bamazinyo bathi uma umqhele izinyo imele, akunakwenzeka ukuba zibe mhlophe. Uma uphawu, akashintshi umbala walo, koqweqwe lwawo kuyoba ukukhanya. Ngezinye izikhathi phakathi koqweqwe lwawo kungabonwa isiteshi uphawu kanye nokubuyiselwa yangaphakathi ngisho efile, izinyo abalimala iba luhlaza ezahlukene. Kulokhu, inkinga zingaxazululwa kuphela ngosizo imiqhele noma veneers.
Rationality amakhorali incike lwezimpawu. Uma it has usayizi umxhwele, le nqubo asikwazi ukwenziwa. Ngemva kokugcwalisa namazinyo anterior ngaphambi nangemva amakhorali kuyoba umbala ofanayo njengoba amazinyo kuqhubeke. Kulokhu, amazinyo iyoba Umbala nezinala.
Uma seal amancane, ungazama amakhorali. Kodwa ekugcineni kuzodingeka ukufaka lwezimpawu entsha, okuzodingeka umthunzi elihambisana umbala wamazinyo bleached.
Kufanele futhi ukuthi ngemva kwesikhathi esithile koqweqwe lwawo ukuthola luhlaza wangaphambili futhi esiyinhlanganisela noma ezinye izinto futhi kuyabonakala. Ngakho-ke, kuzodingeka ukuba usuphinda.
Amazinyo ukuthi babe ofakwe, ukudabula izigaba ezintathu ezilandelayo amakhorali:
professional amazinyo wokuhlanza;
sokubuyiselwa - esikhundleni ofakwe emidala baqale emisha okuzokwenza ukufanisa umthunzi entsha amazinyo.
Uma phambi amazinyo asethwe ofakwe emikhulu, khona-ke esikhundleni mhlophe kungenziwa eziqinile veneers ngobumba, okuyinto ngokungafani koqweqwe lwawo, ungalokothi ukushintsha umbala.
Odokotela bamazinyo iziguli eziningi musa batusa amakhorali. Le nqubo - hhayi izinwele Umbala, okungase kwenziwe lapho bethanda khona iklayenti sika. Lena ngokuyinhloko operation yezokwelapha edinga iseluleko sikadokotela.
Ngosizo a professional amazinyo siphungule kukhona mhlophe kakhulu, kodwa buthakathaka koqweqwe lwawo zingavela caries, demineralization, amakhemikhali ukusha, kungase kwandise ukuzwela, uma ningagcini izinyathelo zokuphepha phakathi naleyo nqubo.
Usizo lwabenza imisenenzi bamazinyo mhlophe ngeke kufanele kwenziwe kuphela uma kukhona nobufakazi basemtholampilo.
Ibhali njengokudla kodobo
I-Armenian Church yaseSt. Hripsime (Yalta, eCrimea)
Zezinwele Trendy usebenzisa ayina